“Waxaa madaxda dowladda ugu baaqayaa inaysan ololahooda doorasho u isticmaalin hantida qaranka..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Waxaa madaxda dowladda ugu baaqayaa inaysan ololahooda doorasho u isticmaalin hantida qaranka..”
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa madaxda dowladda federalka Soomaaliya uga digay in dhaqaalaha dalka ee qaranka ka dhaxeeyo ay u isticmaalaan musharxanimadooda ku aadan doorashada dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkaan 2016-ka.
Mr. Farmaajo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu og-yahay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiiid ay labadoodaba yihiin musharaxiin doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada dalka, balse sheegay inay muhiim tahay dhaqaalaha dalka ee qaranka ka dhaxeeya aanan loo adeegsan ololaha doorashada.
“Waxaa madaxda dowladda ugu baaqayaa inaysan ololahooda doorasho u isticmaalin hantida qaranka, waan la socdaa in madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ay labadoodaba yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada dalka” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo.
Dhinaca kale, Mr. Farmaajo ayaa ku baaqay in la bixiyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale mida shaqaalaha rayidka ee dowladda, kuwaas oo dhowr bilood hore aanan qaadan mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen.
“Waxaan sidoo kale baaq u dirayaa madaxda dowladda inay ku dadaalaan bixinta mushaaraadka ciidanka qalabka sida iyo shaqaalaha rayidka ah, sida la iisoo sheegay dhowr bilood hore wax mushaaraad ah ma aysan qaadan dadkaas, marka ma ahan in xaqa dadkaasi lagu tunto” Ayuu Mr. Farmaajo hadalkiisa raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa kusoo beegmaya xilli dhamaadka sanadkaan la qorsheeynayo inay dalka ka dhacdo doorasho, iyadoona digniino badan ay kasoo baxayaan in dhaqaalaha qaranka loo isticmaalo ololaha doorashadaas.